Yini i-Iexplore Exe? - Amafayela
Main > Amafayela > Iexplore indawo exe - izimpendulo nemibuzo ejwayelekile
Iexplore indawo exe - izimpendulo nemibuzo ejwayelekile
Yini i-Iexplore Exe?
I-iexplore.exeIfayela libizwa njengefayela elisebenzisekayo leMicrosoftI-Internet Explorer. Isibonisi sokuqhafaza somsebenzisi weiexplore.exeIfayela lakhiwa amakhasi wokuqhafaza we-Intanethi abukwayo.Ukuhlola.exeisiphequluli seWebhu esixhuma kwi-Intanethi lapho umsebenzisi efaka i-URL kubha yekheli etholakala ku-GUI yayo.2 jana. 2009
Sanibonani nonke! Lo mbhalo umayelana nokususa izikhangiso ezibangelwa amagciwane kuziphequluli ezinjengeGoogle Chrome, MozillaFirefox, Opera, Yandex Browser, Microsoft Edge neInternet Explorer. Uma isiphequluli sakho sivula ngokungazelelwe amathebhu ngezikhangiso (isb.
I-Vulcan Casino), uma amathebhu anamawebhusayithi adumile (i-Yandex, i-VK, i-YouTube, i-Odnoklassniki) abonakala egcwala amabhanela wokukhangisa angeziwe noma izikhangiso ziqala ukukhanyisa ngokushesha nje lapho uqala isiphequluli. Lokhu kusho ukuthi ikhompyutha yakho inegciwane. Zonke lezi zikhangiso zinciphisa ijubane ikhompyutha kangangokuthi akunakwenzeka ukusebenza nesiphequluli! Isibonelo, ngafaka izinhlelo eziningana kusuka kumthombo osolisayo.
Ngenxa yalokho, ngithola okulandelayo ngaphandle kokuthola noma yisiphi isaziso: • Isiphequluli se-Amigo nezinye izinsizakalo ezivela ku-Mail.ru zafakwa (i-Odnoklassniki, iVkontakte, i-Automatic Software Update Service, i-Unity Web Player) • isiphequluli sami esizenzakalelayo sashintshelwa ku-Amigo; • ikhasi eliyisiqalo lezinye iziphequluli lishintshelwe ku-Mail.ru; • Zonke iziphequluli zihlala zikhombisa amabhanela okukhangisa (nazi izibonelo ezimbalwa).
Kodwa-ke, lokhu kuyisiqalo nje - izinto zingaba zimbi kakhulu kuwe. Ngaphambi kokuthi uqale ukususa izikhangiso ezibangelwa amagciwane, ungabuyela endaweni yokugcina yokugcina noma ubuyisele isistimu yakho esithombeni lapho unike khona amandla isici esinjalo kukhompyutha yakho, ungabheka izindatshana zami zangaphambilini ukubona ukuthi zenze kanjani Kungenjalo, uzoba ukususa igciwane ngesandla. Inqubo ende futhi eyisicefe enezinyathelo eziningana: • Ukuhlanza i-Windows Scheduler; • ukususa i-malware (amagciwane); • ukuhlanza uhlu lwama-boot system; • Ukuhlanza isiphequluli.
Ekuchazweni kwalesi sihloko ungaya ezingeni olifunayo. Okokuqala, nqamula ikhompyutha kunethiwekhi bese uhlola isheduli yomsebenzi. Amagciwane nezinhlelo ezingafuneki zivame ukudala imisebenzi ezenzakalelayo ukwenza izinqubo ezahlukahlukene ze-malware: • Landa, ufake futhi uvuselele kusuka kuwe nakwamanye amagciwane; • Ukuvulwa okuphoqelelwe kwamathebhu wokukhangisa kuziphequluli njll.
Usebenzisa iSihleli Semisebenzi, igciwane lingazifaka kabusha ngenkathi uzama ukulisusa Imisebenzi, iya ku-Iphaneli Yokulawula / Amathuluzi Wokuphatha / Isihleli Somsebenzi. Chofoza kanye kulabhulali yokuhlela bese usesha uhlu lwemisebenzi ehlobene nezinqubo ze-malware (ezinye zazo ezingatholakala encazelweni yalesi sihloko ngezansi). Endabeni yami kukhona 'Thola Ijenali' ne- 'MailRuUpdater'.
Susa le misebenzi. Ukuze wenze lokhu, chofoza kwesokudla emsebenzini, khetha u-'Susa 'bese uqinisekisa ngo-OK. Ngemuva kokuthi ususe yonke imisebenzi ye-malware kusihleli somsebenzi, iya ku-Iphaneli yokulawula / Izinhlelo nezinhlelo bese uhlela izinhlelo ezifakiwe ngosuku lokufakwa kokugcina.
Ungabona ukuthi yiziphi izinhlelo nezici ezifakiwe ngaphandle kokwazi kwakho. Kimi usuku lokutheleleka lungoDisemba 9th 2017 futhi nazi izinhlelo ezifakwe yimina uqobo: • Isiphequluli se-Amigo; • Insizakalo yokuvuselela isoftware ezenzakalelayo; • Unity Web Player. Susa konke.
Ukuze wenze lokhu, chofoza kanye ngenkinobho yegundane kwesokudla kuhlelo bese ukhetha u-'Delete'. Enye i-malware ayikwazi ukususwa ngale ndlela ngoba ayiveli kumenyu yezinhlelo nezinhlelo. Qala i-Task Manager ngokucindezela inhlanganisela yokhiye Ctrl + Shift + Esc.
Bese uchofoza ku- 'Imininingwane engaphezulu' bese uvula ithebhu ye- 'Imininingwane' (ku-Windows 7 lena yithebhu ye- 'Izinqubo') bese ubheka noma yiziphi izinqubo ezisolisayo ezisebenza kukhompyutha yakho. Endabeni yami lawa yiMailRuUpdater.exe, mrupdsrv.exe avela kuMeil.ru Update Service njalonjalo (bona uhlu olwandisiwe encazelweni).
Bese uchofoza kwesokudla kwenye yezinqubo (isb.MeyiliRuUpdater.exe), chofoza ku- 'Filelocation' bese uqaphela indlela eya kule folda (kimi lokhu ngu-Andrey Revchuk / AppData / Local / Mail. Ru).
Phinda lezi zenzo nganoma yiziphi izinqubo ezisolisayo, bese uqala kabusha ikhompyutha yakho ku-Safe Mode (ukubona ukuthi kanjani, hlola izindatshana zami zangaphambilini). Kwimodi ephephile, iya ku-Control Panel / File Explorer Izinketho, bese uchofoza ithebhu ethi 'Buka' bese ukhetha inketho ethi 'Khombisa amafayili afihliwe, amafolda nezinketho'. Susa ukumaka ibhokisi eliseduze kokuthi 'Fihla amafayela wohlelo lokusebenza oluvikelwe (Kunconyiwe)', bese usebenzisa izinguquko kuwo wonke amafolda.
Ngemuva kwalokho iya kumafolda owabhale phansi indlela yawo futhi ususe wonke amafayela namafolda adalwe yilezi zinqubo ze-malware, kimi ngingathola ifolda yeMail.ru endleleni “С: / Users / Andrey Revchuk / AppData / Local / ”Bese uyisusa. Ngemuva kokuthi amagciwane esusiwe, vula i-Task Manager, chofoza ku- 'Start' bese uhlola ukuthi kukhona yini okungahambi kahle.
Khubaza futhi ususe noma yiziphi izinqubo ezingafuneki. Ukuze wenze lokhu, chofoza kwesokudla kulayini, khetha indawo yefayela bese uyisusa. Phinda le nqubo kuzo zonke izinqubo ezisolisayo ngemuva kwalokho cindezela u-Win + R, thayipha u-'Regedit 'bese ucindezela u-Enter.
Ama-virus nezinhlelo ezingafuneki zakha okufakiwe kubhalisi ukulanda noma ukuvuselela amafayela wazo lapho iWindows iqala. Lokhu okufakiwe kutholakala kuzikhiye zokubhalisa i-HKEY_LOCAL_MACHINE ne-HKEY_CURRENT_USER endleleni / iSoftware / iMicrosoft / iWindows / Inguqulo yamanje kumafolda e-Run ne-RunOnce. Uma ngabe le migqa yokubhalisa (i-Run ne-RunOnce) iqukethe okufakiwe kwerejista okuhlobene nezinqubo ze-malware, zisuse.
Ukuze wenze lokhu, chofoza kwesokudla kufayela elidingekayo (isb. I-Amigo) bese uchofoza ku-'Delete.' Ngemuva kwalokho sesha irejista yamagama ezinqubo ze-malware.
Khetha i- 'Computer' kusihleli se-registry bese uchofoza ku- 'Sesha' kuthebhu ethi 'Hlela'. mail.ru) bese uchofoza ku- 'Thola okulandelayo'.
Susa noma yimiphi imigqa yokubhalisa lapho kutholakala khona lezi zinqubo. Ukuze wenze lokhu, chofoza kwesokudla kufayela elidingekayo bese uqhafaza ku-'Delete'. Ngemuva kokususwa ngakunye, cindezela ukhiye we-F3 (isb.qala kabusha usesho lokufakiwe kwe-malware okunegama elinjalo.
Lesi senzo kufanele siphindwe kuze kube lapho umhleli we-registry engakutholi okufakiwe kwe-malware kosesho lwakho. Qaphela kakhulu - uma uthola eyodwa Susa ulayini wesistimu kusihleli sokubhalisa, ikhompyutha yakho ayisasebenzi okufakiwe, vala isihleli sokubhalisa. Bese ucindezela u-Win + R, t Thayipha “msconfig” bese ucindezela u- “Enter”.
Vula ithebhu “Yezinsizakalo” bese ukhetha “Konke Fihla Izinsizakalo zeMicrosoft” bese ubheka uhlu. Uma ubona izinsizakalo ezihlobene namagciwane noma izinqubo ze-malware, ungahloli amabhokisi aseduze kwalezo zinsizakalo bese uqhafaza KULUNGILE. Endabeni yami, yi-'Mail.ru Update Service ',' Updater.Mail.Ru '.
Ngemuva kokuyikhubaza, phuma kwimodi ephephile bese uqala kabusha ikhompyutha ngemodi ejwayelekile. I-Sch ritt yakho elandelayo ukubheka izinqamuleli zesiphequluli kudeskithophu, kuthileyi yesistimu nakumenyu yokuqala. Kwesinye isikhathi amagciwane noma izinhlelo ezingafuneki zishintsha inani kulayini oqondisiwe wesinqamuleli.
Ngemuva kwalokho, ikhasi lokuqala lesiphequluli sakho lizoshintshela kuwebhusayithi ongayijwayele futhi isiphequluli sakho sizoqala ngamawindi amasha abawakhangisayo. Ukulungisa inkinga, chofoza kwesokudla kusinqamuleli (isb.isiphequluli se-Chrome) bese ukhetha Izakhiwo.
Bheka ngokucophelela inani kulayini oqondisiwe wesinqamuleli sesiphequluli sakho. Ku-Google Chrome, ukuphela komugqa kufanele kube yinani. iqukethe i-'Chrome.exe 'futhi indlela kufanele ibe kufolda enalolu hlelo.
Uma isinqamuleli sikhombisa indlela eya efayeleni ngaphandle kwefayela lohlelo .exe (isb. Ifayela le-.url noma .bat) noma uma indlela iqukethe ikheli le-URL lewebhusayithi (isb. Http: / /virussite.com), kufanele shintsha le ndlela iye ku: • kuma-32-bit Windows - “C: Program Files Google Chrome Application chrome.exe '; • nge-64-bit Windows - 'C: Program Files (x86) Google Chrome Application chrome.exe'.
Ngemuva kokwenza izinguquko, chofoza u-'Faka isicelo '. Ungathola izibonelo zamanani akhonjiwe afanele wezinqamuleli ezivela kwiziphequluli ezinjengeChannel, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, Microsoft Edge neYandex Browser encazelweni yalesi sihloko. Esikhundleni sokushintsha isinqamuleli, ungayisusa bese wenza okusha.
Ngemuva kwalokho kufanele usethe kabusha izilungiselelo zesiphequluli. Lo msebenzi uzo: • Setha kabusha amasethingi ekhasi eliyisiqalo; • Setha kabusha ukufinyelela okusheshayo bese upheqa amakhasi ohlelo; • ukuxazulula wonke amathebhu; • Yenza uhlelo lukhubaze zonke izingqikithi zesiphequluli nezandiso; • Yenza uhlelo lususe wonke amafayela wesikhashana (kufaka phakathi amakhukhi). Amabhukhimakhi akho, umlando kanye namaphasiwedi azogcinwa.
Ukuze wenze lokhu kusiphequluli se-Google Chrome noma i-Yandex, iya ku-Izilungiselelo / Khombisa izilungiselelo ezithuthukile, bese uchofoza ku-'Setha kabusha izilungiselelo' bese uchofoza ku-'Setha kabusha'. Ku-Mozilla Firefox, iya kumenyu Yolwazi Lokusiza / Ukuxazulula inkinga, bese Uhlanza i-Firefox bese uqinisekisa isinqumo sakho. Ngemuva kokusetha kabusha i-Firefox, ifolda enezilungiselelo zesiphequluli ezindala izovela kudeskithophu.
Lokho kusho ukuthi, iFirefox idala isipele kwideskithophu (ebizwa ngegama elithi 'Old Firefox Data') futhi ungabuyisa idatha esusiwe usebenzisa ifolda ekwideskithophu, uma kwenzeka ulahlekelwe okuthile okubalulekile, vele ususe leyo folda. Ayikho inketho yokusetha kabusha okuzenzakalelayo kusiphequluli se-Opera, ngakho-ke kuzofanela ukwenze ngesandla. Iya kumenyu, khetha 'Mayelana ne-Opera' bese uvula izindlela eziya kuphrofayili yomsebenzisi kanye nesilondolozi sesiphequluli ku-File Explorer.
Yenza i-Close Opera bese ususa konke okuqukethwe kuphrofayela kanye namafolda e-cache. Le nqubo izosetha kabusha wonke amasethingi we-Opera. Ku-Microsoft Edge, iya kokuthi Amasethingi nangaphansi kwesigaba 'Sula idatha Yokuphequlula', chofoza okuthi 'Khetha okuzosuswa'.
Khetha 'Amakhukhi nedatha yewebhusayithi egciniwe'. 'Futhi' Londoloza idatha namafayela ', bese uchofoza ku-' Delete '. Ku-Internet Explorer, iya kokuthi Izinsiza / Izakhiwo Zesiphequluli, bese uvula ithebhu ethi Amasethingi Athuthukile bese uqhafaza ku- “Setha kabusha” (ungaphinda ususe imininingwane yakho ngokukhetha le ndlela).
Kufanele uqale kabusha ikhompyutha yakho ukuze izinguquko ziqale ukusebenza. Ekugcineni, ifayela 'le-Homes' kufanele lihlolwe. Ukuze wenze lokhu, qala i-Notepad njengomlawuli, khetha u- “Open” kumenyu ye- “File” bese unika amandla ukuvezwa kwawo wonke amafayela, bese uya ku- “С: / Windows / System32 / drivers / etc” bese uvula ifayili elithi “Sebawoti”.
Uma imigqa iqala ngaphandle kwe-hash, isuse bese ugcine ifayili. Uma uyithandile le ndatshana, chofoza inkinobho ethi 'Thanda' ngezansi bese ubhalisele isiteshi sethu ukuze ubone okuningi. Siyabonga ngokubuka futhi sikufisela inhlanhla!
Ingabe i-iexplore exe igciwane?
Ukuhlola.exekungukuphumelela kwesiphequluli sewebhu 'Umhloli we-inthanethi'kusuka kuMicrosoft. Akuyona i-igciwanenoma iTrojan kepha amanye ama-malwares noma ama-spywares angazama ukulingisa amafayela akho ngakho-ke qiniseka ukuthi ukubheka lokho. sicela uzame ukuvala wonke amafayela we-iexplore.exengomphathi womsebenzi.
Ikuphi indawo ye-Internet Explorer Windows 7?
Sebenzisa i-I-Internet Explorerisinqamuleli kusuka ku-Start Menu
Ku-Amawindi10, vula imenyu yokuqala bese uya kuzo Zonke izinhlelo zokusebenza ->AmawindiIzesekeli. Lapho, uzothola isinqamuleli se-I-Internet Explorer. Ku-IWindows 7, vula imenyu yokuqala, chofoza ku-'Zonke Izinhlelo 'bese uqhubekaI-Internet Explorer.Juni 27, 2017
Uyemukelwa esiteshini esisemthethweni se-windows 7 futhi namhlanje sizokukhombisa ukuthi ungayithola kanjani i-Internet Explorer 10 ye-Windows 7 uma ungajahi ukuthola inguqulo entsha ye-Internet Explorer noma uma nje ungasebenzisi i-Internet Explorer wena Akudingeki ukuthi uyilande futhi izoba kokunye kokuvuselelwa kweWindows emasontweni azayo, kepha uma ufuna ukushesha futhi manje usune-Internet Explorer 10, okumele ukwenze nje ukuya ku downloadmicrosoft.com bese ubheka esikhungweni sokulanda phezulu ngakwesokudla bese uthayipha ebhokisini lokusesha elincane bese ufaka i-Internet Explorer 10 ye-Windows 7 futhi into yokuqala ozoyibona ku-Internet Explorer 10 yekhasi le-Windows 7 kokulandiwe. Khumbula ukuthi udinga i-Service Pack 1 ku-Windows 7 uma ufuna ukuyithola i-Internet Explorer 10 ibaluleke kakhulu, uma ungazi ukuthi unayo yini i-Service Pack 1 vele uye kumenyu yakho yokuqala, chofoza iphaneli yakho yokulawula bese ufaka iSystem ne Ithebhu yezokuphepha ukuze ijubane ngesivinini ngaphansi kwethebhu Yesistimu futhi lapho kimi uzobona ngqo ku-System Type 32-bit OS, kepha ungahle ube ne-OS engama-64.
Kubaluleke kakhulu ukwazi ukuthi kunezindlela ezimbili zokulanda i-Internet Explorer 10 uma ibuza umbuzo. Iphakethe elikhulu ongalilanda lidinga ukuthi wazi ukuthi unenguqulo engu-64 noma engu-32 noma lapha unalokhu kulanda okuncane okungama-megabyte angama-22 okuvele sekunguqulo enhle, i-x86 yenguqulo engama-32-bit ifaka phakathi i-Sure unayo inguqulo enhle engama-64- noma ama-32-bit, uma usebenza nge-64-bit kufanele ithi x64 esikhundleni se-x86 futhi lapha unalo leli windi elincane lapho wenza ukulanda, lifake You Internet Explorer 10. Uma uchofoza kulo, uzobona leli windi lapha elibonisa ukuthi i-Internet Explorer 10 ifakiwe.
Iqala ngokulanda izibuyekezo ezidingekayo kuwebhusayithi ye-Microsoft Onestop, ngiyaxolisa, bese ilanda i-Internet Explorer uqobo ngaphambi kokuba iqede ukufaka kwikhompyutha yakho sengivele ngiyifakile ku-ex yami engu-64x64 bit Windows 7 futhi kuthathe cishe imizuzu eyi-15 isiyonke, kepha lokhu kungashintsha kuye ngejubane le-Internet Explorer yakho. Ngakho-ke kubalulekile ukwazi ukuthi kungathatha isikhathi eside uma ukuxhumeka kwakho kwe-inthanethi kuhamba kancane ngokwesibonelo, futhi kungahamba kancane kwamanye amakhompyutha ahamba kancane Le yikhompyutha eyinhloko yombaxambili, kodwa futhi ingashesha ngokuya ngokusetha kwakho.
Yonke le nqubo iqonde ngqo. Izomane ifake zonke izibuyekezo ze-Internet Explorer bese imane ikucele ukuthi uqale kabusha ikhompyutha yakho kunguqulo engu-64-bit engangicelanga ukuthi ngiqale kabusha ikhompyutha yami ngicabanga ukuthi angisiye angikhumbuli engqondweni, kodwa kukhona okuhle ithuba lokuthi isibuyekezo se-Internet Explorer sizokushukumisela ukuthi uqalise kabusha ikhompyutha yakho noma kunjalo futhi kulula kakhulu ukuthi ayikho imibuzo ebuzwa ngemuva kokuthi yonke into ifakiwe futhi ifuna ukuthi ikhompyutha yakho ibe ngemuva kokulanda kabusha lokhu kulanda. Manje usufakwe i-Internet Explorer10 kwikhompyutha yakho Ungesabi i-Internet Expl noma i-10 Uma uzibuza, yebo kahle, ngashaqeka lapho ngishintsha ngisuka ku-Explorer 8 ngaya ku-Explorer kwathi ngo-9 futhi abantu abaningi bakwenza ngoba kubo bashintshe kakhulu i-UI nokubukeka konke kwe-Internet Explorer futhi balahlekelwa abantu abaningi, uyazi ukuthi balahlekelwe yizinsimbi zabo futhi wawungazi nje ukuthi bangazithathaphi izintandokazi zabo futhi uyazi abantu abalahlekelwe abantu abaningi abantu, labo abangewona ubuchwepheshe be-tech abalahleka kalula lapho izinto ziguqulwa, ngakho-ke lokho kungenye yezinto ezibaluleke kakhulu mayelana nokwenza ngcono isoftware, ingabe izongiguqula indlela yami? Izinto okufanele zenziwe nalokho okuhle futhi i-Internet Explorer 10 ukuthi uma usuvele uku-Explorer 9, kuhle impela ngoba ngeke nje kuguquke kakhulu.
I-Internet Explorer 10 izogcina wonke amabha wakho wamathuluzi nezilungiselelo njengoba zikwi-Internet Explorer 9 ngakho-ke akudingeki. Nginovalo lokwazi ngempela ukuthi ukuthuthuka kuyaqhubeka. Kuyiqiniso ukuthi i-Internet Explorer iyingxenye enkulu yesoftware yeWindows futhi njenganoma yiziphi izinto zokubuyekeza ezingahambi kahle nginezindaba ezimbalwa ezethusayo mayelana nekhompyutha yakho enezinkinga nge-Internet Explorer noma engabhuli ngemuva kwale Expert 10 kepha sekukonke enginakho kubonwe izinto zihamba kahle ngendlela yaseBrithani.
Ngazithuthukisa ngaya kwimishini emihlanu ukuhlola eyishumi futhi engingakusho ukuthi angikaze ngibe nezinkinga nganoma imuphi umshini obuyekeziwe futhi uma ungaqiniseki ukuthi ushintshele ku-Explorer 10 futhi ubona ukuthi ithi qala kabusha manje, ngakho-ke uqale ikhompyutha. Ngakho-ke uma ungenaso isiqiniseko sokuthi ufuna ukuthuthuka yini, bheka enye yezindatshana zami engizibeke ku-inthanethi Izinguqulo zakamuva zeFirefoxChrome ezivivinywe i-Internet Explorer 10 kanye nejubane lamawebhusayithi engingakutshela ukuthi i-Internet Explorer 10 yiwo ngempela isiphequluli esisheshayo ongaba naso manje kwi-PC yakho noma ezimbili njengamanje ze-Windows 7 ezinhle futhi ziyizifo othi uma uthola inguqulo enhle kuwebhusayithi yakwaMicrosoft konke okumele ukwenze ukuchofoza kuyo Konke kuhamba kahleAkukho mibuzo efakiwe ngempela kalula futhi uma ikhompyutha yakho iqala kabusha kahle uzoba ne-Internet Explorer 10 yakho entsha efakwe kwikhompyutha yakho.Lokhu ukuthola imininingwane eyengeziwe ku-Windows 7 naku-Explorer 10 ye-Windows 7, bheka izindatshana zami, ama-Video amaningi ku-inthanethi futhi ngizothumela okumbalwa izindatshana ze-Internet Explorer 10 bese ukhuluma ngezici zayo nemisebenzi Izinketho futhi uma uthanda lezi zihloko chofoza inkinobho ethi Bhalisa ngaphezulu kwesikrini uzokwazisa izindatshana ku-inthanethi. ents noma imibuzo, sicela usazise futhi sethemba ukubuyela esiteshini esisemthethweni seWindows 7, usale kahle
Ungayitholaphi iexplore.exe ku Windows 10?
Enye indlela ongayithola ngayo ngokusebenzisa ibhokisi lokusesha ku-Taskbar, thayipha i-Internet Explorer, uchofoze kwesokudla bese uqhafaza iPin ku-Taskbar. Okokugcina, kodwa okungenani, usebenzisa umyalo we-Run. Cindezela ukhiye weWindows + R. Type: iexplore.exe. Shaya u-Enter. Yilokho kuphela. Bhalisa.
Ngikutholaphi i-Internet Explorer kukhompyutha yami?
Ungangena kwi-Internet Explorer ngezindlela ezimbili: Uma usuyitholile, qhafaza kwesokudla bese uqhafaza uPin ku-Taskbar Enye indlela ongayithola ngayo ngokusebenzisa ibhokisi lokusesha ku-Taskbar, thayipha i-Internet Explorer, uchofoze ngakwesokudla bese uqhafaza uPin ku-Taskbar Okokugcina, kodwa okungenani, usebenzisa umyalo we-Run.
Yini inqubo yangemuva ye-iexplore.exe?
Inqubo engemuva iexplore.exe (Ngamagama amancane) I-Amod Imvamisa kuba ngumhloli wamazwe we-inthanethi kepha uma ungavulanga i-IE okwamanje futhi inayo enye into. Ukwazi isikhangiso ukuqagela kwami ​​ngoba kwenza ibha yamathuluzi ivele.
Ngingangena kanjani ku-Internet Explorer?
Ungangena kwi-Internet Explorer ngezindlela ezimbili: Chofoza ku-Start & gt; Zonke izinhlelo zokusebenza bese ubheka ngaphansi kwe-Windows Accessories. Uma usuyitholile, qhafaza kwesokudla bese uqhafazaPhina ku-Taskbar. Enye indlela ongayithola ngayo ngokusebenzisa ibhokisi lokusesha ku-Taskbar, thayipha i-Internet Explorer, uchofoze kwesokudla bese uqhafaza iPin ku-Taskbar.